I-Realme GT, sihlalutya into entsha evela kwiRealme ukuzibeka kwindawo ephezulu | Iindaba zeGajethi
I-Realme GT, sihlalutya iRealme entsha ukuze sizibeke kuluhlu oluphezulu
Realme iyaqhubeka nokubheja ekunikezeleni izixhobo ezibeka ezinye iindlela ezandleni zabathengi ezinomgangatho onomdla / umyinge wexabiso. Nangona kunjalo, khange sikukhumbule ukumiliselwa kweRealme ngolindelo olukhulu ngasemva njengolu, ubuncinci emva kokufika kwayo eYurophu, esabelana ngalo apha kwiActualidad Gadget.
Sihlalutya nzulu iRealme GT entsha, isixhobo esizibiza ngokuba "ngumbulali ophambili", sikuxelela zonke izinto zalo kwaye ukuba inokubekwa njengenye indlela yokufikelela kwisiphelo esiphakamileyo. kumaxabiso afana ngokusondeleyo kumgangatho ophakathi. Sukuphoswa yiyo.
Njengoko kusenzeka ngamanye amaxesha, sigqibe kwelokuba sihambe kunye nohlalutyo olunzulu kunye nevidiyo ekhokelela kwiposti. Kwividiyo uya kuba nakho ukufumana phakathi kwezinye izinto Gcwalisa ukungabikho kwebhokisi kule Realme GT, ukuvavanya ke umgangatho wekhamera kurekhodo lokwenyani. Uya kusinceda ukuba siqhubeke nokukhula ukuba uyarhuma, usebenzise ibhokisi yezimvo ukuze usishiyele nayiphi na imibuzo onayo, kwaye usishiyele into oyithandayo.
2 Iinkcazo zobugcisa
3 Amava emultimedia
Isixhobo sinesakhelo esenziwe ngeplastikhi, isizathu soku inokuba kukukhanya, nangona kunjalo, inyani kukuba ibonisa ukonga iindleko xa ufuna into ehlengahlengisa ixabiso lesixhobo ngangoko kunokwenzeka. Ngokufanayo, eSpain sinokuthenga kuphela iinguqulelo ezimbini: Iplastiki ibuye ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, okanye i-hybrid ibuyele ngesikhumba se-vegan kunye neplastiki. Isikhumba se-vegan senziwe kakuhle ngokungaqhelekanga, asisijiyi isixhobo kwaye sibonakala sixhathisa. Andazi ukuba iyakuphila njani ekuhambeni kwexesha, nangona kunjalo, iRealme ibandakanya imeko yesilicone ebhokisini.
Sinobukhulu be-158 x 73 x 8,4 ubunzima obulula kakhulu be ziigram ezili-186 kuphela, into eyothusayo ithathela ingqalelo iphaneli ephantse ibe zi-intshi ze-6,5. Sine-freckle ngaphambili ngaphambili, apho kuya kubakho khona ikhamera. Ezantsi kwe-bezel ye-USB-C, isithethi esiphambili kunye ne-3,5mm jack. Iplastiki inomtsalane okhethekileyo kwiminwe, akukho nto isothusayo. Esandleni, inguqu etyheli eyakhiwe ngesikhumba se-vegan iyamangalisa, ukujija okunomdla okuvelisa iimvakalelo ezixubeneyo xa ndifumanisa ukuba isakhelo senziwe ngeplastikhi.
Ndigqibe kwelokuba ndibheje ngaye IQualcomm Snapdragon 888 5G, Amandla aqinisekisiweyo, ehamba neenguqulelo ezimbini phakathi I-8 kunye ne-12 GB ye-LPDDR5 RAM isantya esiphezulu, into efikelela kuvuthondaba ngeenkumbulo UFS 3.1, ngesantya esiphezulu, esiya kuthi sitshintshe phakathi kwe- I-128GB kunye ne-256GB kuxhomekeke kuhlobo olukhethiweyo.
Conectividad I-Bluetooth 5.0-5G ye-DualSIM- i-WiFi 6 - i-NFC-iGPS ezimbini
Kwinqanaba lonxibelelwano, ukumiliselwa kwe WiFi 6, Asizilibali iimpawu zoluhlu olunjengeNFC okanye iGPS yebhendi emibini.
Sinepaneli Phantse i-6,5-intshi ye-SuperAMOLED ibonelela ngokuqaqamba okuphezulu kwe-1000 nits, Kuza kuhamba kunye nenqanaba le-120 Hz esinokuyiguqula ukuze silondoloze ibhetri, nangona ngokungagqibekanga imo "ezenzekelayo" ivuliwe eya kuzikhathalela. Ukusetyenziswa kwescreen kusondele kuma-92% kwaye kweli candelo iRealme GT ifezekiswe kakuhle kweli candelo nangona ine-burr yeklasikhi emazantsi. Ixabiso lokuhlaziya iphaneli yokuchukumisa yi-360 Hz ke kulo mbandela amava alunge kakhulu kunxibelelwano lwemihla ngemihla.
Isandi "sis stereo." Inesithethi esingaphambili nesine-bezel ephezulu, eyokugqibela inamandla ngakumbi kwaye icacile kunangaphambili. Nokuba yeyiphi na, banikezela ngamava amahle e stereo ngale nto engqondweni, isandi esilungiswe kakuhle. Iphaneli, ekwahlengahlengiswa kakuhle ngokwemibala kunye nokuqaqamba, inikezela abamnyama bengahlambulukanga njengoko ubuya kulindela kwiphaneli I-SuperAMOLED, Ubuncinci kukuqaqamba okuphezulu. Sinepaneli ethe tyaba ngokupheleleyo.
Isixhobo sonyusa i-4.500 mAh ngentlawulo ekhawulezileyo ebolekwa yiRealme kwaOppo, sine65W ngetshaja yeSuperDart ebandakanyiweyo ebhokisini. Oku kusivumela ukuba sisuke I-0% ukuya kwi-100% kwimizuzu engama-35. Ngaphandle kwamathandabuzo sinakho ukuzimela kunye nokutshaja okukhawulezileyo okusithela ngqo isiphelo esiphezulu, de ube uyaqonda ukuba asinakho ukubiza i-Qi ngaphandle kwamacingo, kunye nezinto zokwenza izinto, isikhumbuzi sokuba ayisisixhobo "seprimiyamu", kwaye ayizenzi ngathi .
Sibuyisele ukutshaja kwe-OTG USBC
Ngokubhekisele ekufotweni, zezi zivamvo ezithi zisonyuswe esi sixhobo
Kwifoto esemgangathweni kunye ne-64MP yokufota Sifumene ulungelelwano olufanelekileyo, alunangxaki ngokuchaseneyo, i-HDR iwenza kakuhle umsebenzi wayo kwaye ibonisa umfanekiso wendalo. Inkcazo elungileyo ezikhuselayo kwanaxa kusebusuku kunye nokuseta kwefektri.
Ikhamera ye-Angle ebanzi ihlupheka kakhulu ngokuchaseneyo kwaye inikezela ukugcwala kwemibala kwiimeko ezininzi. Ebusuku inikezela ngokugqithisileyo "i-watercolor" ngenxa yokulungiswa kweefoto. Ngokwenxalenye yayo, ilensi yeMacro iyawenza umsebenzi wayo okoko nje iimeko zokukhanyisa zilungile. Ukufota kwi Modo Umzobo iyahambelana, ngaphandle kokumangaliswa, ngoncedo olusivumela ukuba siguqule ukuba ingakanani iBokeh efakiwe.
Ifoto: Selfie Bokeh
Malunga nokurekhodwa kwevidiyo Sinokuzinza okumangalisayo okumangalisayo ngesona senzi siphambili, isoftware egqithileyo kunye "neentshukumo" ezixinanisa umfanekiso kwezinye izivamvo. Ngaphandle koku, ngokukhanya okuphantsi ndingatsho nokuba ndiyamangaliswa sisiphumo.
Ikhamera yangaphambili ibonelela nge-16MP ngokugqitha kwe "imo yobuhle" enikezela nakwindawo yayo esezantsi. Inika iziphumo ezilungileyo zijonga iimpawu zekhamera. Ngokuqinisekileyo icandelo lokufota alililo elona lihle kakhulu kwisiphelo, silibeka phakathi kuluhlu.
Ungalahli iinkcukacha zewebhusayithi yethu kunye nejelo le-YouTube kuba uya kuva kuthi kwakamsinya.
Uyilo olulungileyo kunye nokukhanya
Amandla akhawulezayo amakhulu, ukugcinwa kunye ne-RAM
Ukuzimela kakuhle kunye nokutshaja ngokukhawuleza
Inzwa ephambili elungileyo, inkampani embi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Realme GT, sihlalutya iRealme entsha ukuze sizibeke kuluhlu oluphezulu
Umshini wam wokucoca i-G9, uhlalutyo, ukusebenza kunye nexabiso